बालकृष्ण मैनाली केही समययता बालिका बलात्कार, अपहरण र हत्याको सिलसिलाले देशमा पुनः अग्राधिकार पाउँदै जान थालेको आभास भएको छ । प्रायः बालिका हिंसा गर्ने अपराधीहरुमा आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, चिनेजानेका र
सुरेश चन्द चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाईरसको संक्रमण २०७६ माघ ९ गते नेपालमा देखा प¥यो । वुहानबाट फर्किएका एक पुरुषमा कोभिड – १९ को पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो
प्रज्वल घिमिरे कामना मासिकले २०७७ सालको गाईजात्रा विशेषांक निकाल्ने तयारीका साथ प्रचार–प्रसार र व्यङ्ग्य लेख तथा चित्रहरु आह्वान गर्न थालेपछि म उनलाई सम्झन्छु । उनी अर्थात् पुष्करलाल श्रेष्ठ । नेपाली
देवीलाल चौलागाईं यो संसारका हामी सबै उपभोक्ता हौँ तर पनि उपभोक्ता अधिकार र हकहितको विषय ओझेलमा परेको छ ।हामी कतिलाई त उपभोक्ता अधिकार र कानुनका बारेमा जानकारी पनि छैन ।
भक्ति शाह ‘मिलन’ हालसालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पास ग¥यो । पास त ग¥यो तर आफ्नै नागरिकलाई विभेदमा राखेर । यो नागरिकता विधेयकले महिला र पुरुषमा विभेद
प्रेम रावत वर्तमान परिस्थितिमा मानिसहरू वास्तवमा निकै दुःखी छन्, किनकि यो सहज परिस्थिति छैन । तर सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने, जस्तोसुकै अवस्था होओस्, जस्तोसुकै परिस्थिति होओस्, राम्रो परिस्थिति
मञ्जु भट्ट । एकजना छिमेकीले गतवर्ष वैशाख १ गतेदेखि आफूले पढाइरहेको निजी स्कुल छोडेर घरमै बस्न थालेको देखेर आफू पनि शिक्षक भएको नाताले स्कुल छोड्नुको कारण नसोधी बस्न सकिन ।
नन्दलाल खरेल नेपाली किसानहरु कीरारुपी सलह (फट्याङ्ग्रा) बाट आतङ्कित छन् भने नेपाली जनता दुई राजनीतिक सलहको सलबलले आतङ्कित छन् । किसानको बाली जोगाउन सलह कीरालाई विषादी छर्केर वा अन्य कुनै
भूमिका श्रेष्ठ दुई दशक पार गरिसक्दा पनि अझै लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानअनुसारको नागकिता पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो देश हो, जसले कानुनतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक
कमला रेग्मी विश्वभर कोरोना भाइरसले पारेको विभिन्न प्रकृतिका प्रभावमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नै किसिमको अन्योलता छ । शिक्षा क्षेत्र धेरै भीडभाड र जमघट हुने ठाउँ हो । परिणामतः सरकारले रोकिएको माध्यमिक
श्रीमन्नारायण वस्तुतः नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धको प्रमाण हो । यो एउटा अति नै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । राज्यविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई उसको पहिचान दिनु आवश्यक छ
सावित्रा शर्मा को हुन् सद्गुरु ? गुरुले शिष्यमा रहेका अज्ञानता र अँध्यारा पक्षहरुलाई नष्ट गरी आत्मिक ज्ञानबाट प्रकाशित गर्दछन् । त्यसैले गुरुलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको रुप मानिएको छ ।
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ क्रुर शासक हिटलरले एकपटक एउटा कुखुरोआफ्नो सभामा लिएर आएछन् । त्यस कुखुराका प्वाँखलाई उनले एक–एक गर्दै उखेलेर प्वाँखविहीन पारिदिएछन् । त्यसपछि उड्न नसक्ने त्यो कुखुरोलाई हलमा छोडिदिएर
बालकृष्ण मैनाली कोरोना नामक शत्रुको आक्रमण जारी नै छ । कोरोना भाइरसले कति अवधिसम्म सताउँछ अर्थात् त्यसको अन्त्य कहिले हुन्छ र विश्व जनमतले ढुक्कसँग आ–आफ्नो दैनिकीमा विनाडर र त्रास सहभागी
एच.के. श्रेष्ठ विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म शक्ति र पहुँचको खेल छ । पहुँच, नातवाद, कृपावाद र आर्थिक भरमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । साबिकको उच्च मा.वि.मा दरबन्दी पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्, पाउनै नहुनेले
भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं कोरोना संक्रमणको वृद्धिले राजनीतिमा ठूलो चलखेल गर्ने अवसर मिल्ने भएकै कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नजिकिँदै गरेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई समेत धकेल्न कोरोनाको सहारा लिँदैछन् भन्ने टिप्पणी विशेषज्ञहरूले
चिरञ्जीवी नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको (अमेरिकी सहयोग नियोग) मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने
पविता मुडभरी पुडासैनी केही समयअघि काभ्रे, धादिङ, तनहुँ, कास्की, पोखरा, चितवनलगायतका स्थानमा गाडीभरिका तरकारी डोजरले खाल्टो खनेर नष्ट गरिएका घटना दोहोरिइरहे । यस्ता घटनाले आर्थिक क्षतिसँगै कृषकका मनोबल खस्कने मात्र
प्रेमलकुमार खनाल मुलुकमा अहिले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा व्यापक छलफल तथा बहस भइरहेको छ । तत्कालीन नेपाली सरकारको तर्फबाट सम्झौता गर्ने नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु (यद्यपि यसबारेमा
रोशनीदेबी कार्की यो विषयमा बोल्न मलाई धेरै अगाडिदेखि मन लागेको थियो । फाट्टफुट्ट कलम चलाउने हुँदा मनमा लागेका कतिपय विषयहरु पानीका फोकाझै हराएर जाँदा रहेछन् । भनिन्छ आजसम्म विश्वमा सबैभन्दा